Qarax baabuur loo adeegsaday oo ka dhacay madaarka magaalada Jalalabad ee dalka Afghanistan. – Radio Daljir
Kabuul,27 -Ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhintay qarax baabuur loo adeegsaday oo ka dhacay madaarka magaalada Jalalabad ee bariga dalka Afghanistan.
Wararka la helayo ayaa tibaaxaya in dhawr qof oo kale ay ku dhaawacmeen qaraxaasi.
Dadka qasaaruhu ka soo gaadhay qaraxaan ayaa dhamaantood ahaa dad rayid ah,sida uu xaqiijiyey sarkaal u hadlay Police-ka dalka Afghanistan.
Kooxda mintidka ah ee Daalibaan oo kacdoon ka wadda dalkaasi ayaa sheegatay, massuuliyadda weerarkaasi .
Dalka Afghanistan ayaa waxaa beryihii ugu dambeeyey ka dhacayey banaanbaxyo dhiig ku daatay oo lagaga cabanayey gubitaankii militariga Mareykanka ee Masxafka Quraanka kariimka ah todobaad ka hor.
Madaxweynaha Afghanistan Xamiid kariizay oo la hadlay dadka wadankiisa ayaa codsaday deganaansho.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Kitaabka aan si ku talagl ah loo gubin ,waxana raaligelin ka bixiyey madaxweynaha Maryakanka Brack Obama.
Madaarka magaalada Jalalabad ayaa waxaa adeegsada dadka rayidka ah iyo ciidamada caalamiga ee ku sugan dalka Afghanistan.
Isla xilligan maamulayaasha dalka Afghansitan ayaa weli baadigoobaya nin 25 jir ah oo ka tirsanaa Police-ka dalkaasi oo Sabtidii laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka gaashaanbuurta Nato ku dilay wasaaradda arrimaha gudaha ee Afghanistan,xarunteeda magaalada caasimada ah ee Kaabuul.